Ny Toriteny teo An-tendrombohitra (Fizarana 1) - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2017-01 mpandimby ny Magazine > Ny Toriteny teo An-tendrombohitra (ampahany 1)
"Ny Toriteny teo An-tendrombohitra angamba no ampahany malaza amin'ny fampianaran'i Jesosy, nefa koa tsy dia takatra ary azo antoka fa faran'izay kely indrindra" (The Message of the Sermon on the Mount, pulsmedien Worms 2010, pejy 11). Andao indray hianatra ny Toriteny teo An-tendrombohitra. Angamba hahita harena vaovao isika ary hahatadidy ireo taloha indray.
«Ary rehefa nahita ny vahoaka Izy [Jesosy], dia niakatra teo an-tendrombohitra ka nipetraka; ary nanatona Azy ny mpianany. Dia niloa-bava Izy ka nampianatra azy ka nanao hoe » (Mat 5,1-2). Toy ny fahita matetika dia nanaraka azy angamba ny vahoaka. Tsy natao ho an’ny mpianatra ihany ny toriteny. Nasain’i Jesosy nampiely ny fampianarany eran-tany àry ny mpianany, ary nosoratan’i Matio ho an’ny olona iray arivo tapitrisa mahery izany mba hovakina. Natao ho an’izay te hihaino azy ireo ny fampianarany.
«Sambatra izay malahelo ara-panahy ao; fa azy ny fanjakan'ny lanitra »(and. 3). Inona no dikan'ny hoe "malahelo am-panahy"? Manana fiheveran-tena ambany, tsy dia liana amin'ny zavatra ara-panahy? Tsy voatery. Jiosy maro no nilaza ny tenany ho "mahantra" satria matetika dia mahantra ary niantehitra tamin'Andriamanitra hanome izay nilainy isan'andro. Mety ho ny mpino àry no tian'i Jesosy holazaina. Fa ny "fahantrana ara-panahy" dia manome soso-kevitra bebe kokoa. Fantatry ny mahantra fa tsy manana ny zavatra tena ilaina izy ireo. Fantatry ny mahantra ara-panahy fa mila an’Andriamanitra izy ireo; mahatsapa fa tsy ampy amin'ny fiainany izy ireo. Tsy mihevitra ny tenany ho manao sitraka amin'Andriamanitra izy ireo amin'ny fanompoana azy. Nilaza i Jesosy fa ho tonga amin'ny olona toy izany ny fanjakan'ny lanitra - toa azy ireo. Ilay manetry tena, miankina aminy, izay omena ny fanjakan'ny lanitra. Ny famindram-pon'Andriamanitra irery ihany no atokisany.
«Sambatra izay mijaly any; fa hampiononina izy ireo »(and. 4). Misy ny mampihomehy amin'ity fanambarana ity, satria ny teny hoe "voatahy" dia mety hidika koa hoe "faly". Sambatra ny malahelo, hoy i Jesosy, satria farafaharatsiny mampahery azy ireo ny mahafantatra fa tsy maharitra ny filan'izy ireo. Hamboarina ny zava-drehetra. Mariho fa ny Batisa dia tsy didy - Tsy nilaza i Jesosy fa mahasoa ara-panahy ny mijaly. Betsaka ny olona eto amin'ity tontolo ity no efa mijaly ary nilaza i Jesosy fa tokony hampiononina izy ireo - angamba amin'ny fahatongavan'ny fanjakan'ny lanitra.
«Sambatra ny malemy fanahy; fa izy ireo no hanana ny tany »(and. 5). Tao amin'ny fiarahamonina taloha dia nalaina matetika tamin'ny mpandefitra ny tany. Fa araka ny fomban'Andriamanitra manao izany, dia ho voalamina koa izany.
"Sambatra izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana; fa ho voky izy ”(and. 6). Ireo izay maniry ny fahamarinana sy ny fahamarinana (ny teny grika dia midika hoe roa) dia hahazo izay tadiaviny. Izay mijaly amin'ny ratsy ka maniry hahitsy ny zavatra tokony homena valisoa. Amin'ity vanim-potoana ity dia mijaly amin'ny tsy fahamarinana ny vahoakan'Andriamanitra; mangetaheta ny fahamarinana izahay. Manome toky antsika i Jesosy fa tsy ho foana ny fanantenantsika.
«Sambatra ny miantra; fa hahazo famindram-po »(and 7). Mila famindram-po amin'ny andro fitsarana isika. Nilaza i Jesosy fa izany no antony tokony hanehoantsika famindram-po amin'izao fotoana izao. Mifanohitra amin'ny fihetsik'ireo izay mitaky fahamarinana sy mamitaka ny hafa izany na mitaky famindram-po nefa ny tenany tsy masiaka. Raha te hanana fiainana tsara isika dia tokony hanao zavatra mifanaraka amin'izany.
«Sambatra izay madio am-po; fa hahita an'Andriamanitra izy »(and. 9). Ny fo madio dia iray ihany no faniriana. Izay mitady an 'Andriamanitra irery dia hahazo antoka fa hahita azy izy. Hovalian-tsoa ny faniriantsika.
«Sambatra ny olona milamina; fa izy hantsoina hoe zanak'Andriamanitra ”(and. 9). Tsy hampihatra ny zony amin'ny herin'ny hery ny mahantra. Andriamanitra dia miankina amin'Andriamanitra. Tokony haneho fangoraham-po sy fangorahana isika fa tsy fahatezerana sy tsy fifanarahana. Tsy afaka miaina anaty firindrana eo amin'ny sehatry ny fahamarinana isika raha manao ny tsy rariny. Koa satria maniry ny fiadanan'ny fanjakan'Andriamanitra isika, dia tokony hihavana amin'ny hafa koa.
«Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana; fa azy ny fanjakan'ny lanitra »(and. 10). Ny olona manao ny tsara indraindray mijaly satria tsara toetra. Tian'ny olona ny manararaotra ny mpandefitra. Misy ireo tezitra na dia ireo manao ny tsara aza satria ny ohatra tsara asehony dia vao mainka miharatsy endrika ny ratsy fanahy. Indraindray ny olo-marina mahomby amin'ny fanampiana ny ampahorina amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny fomba amam-panao sy ny lalàna manome fahefana an'ireo tsy marina. Tsy mitady ny henjehina isika, na izany aza, ny marina dia enjehin'ny olona ratsy fanahy matetika. Matokia, hoy Jesosy. Andraso. Ny fanjakan'ny lanitra dia an'izay manao izany.
Avy eo dia niresaka nivantana tamin'ny mpianany i Jesosy ary niresaka azy ireo tamin'ny teny hoe "ianao" amin'ny faharoan'ny olona faharoa: "Sambatra ianareo raha manevateva sy manenjika anareo ny olona noho ny amiko ka miteny ratsy anao isan-karazany rehefa mandainga izy. Mifalia sy miravoravoa; hahazo valisoa lehibe any an-danitra ianao. Fa toy izany koa no nanenjehany ny mpaminany izay talohanareo ”(and 11-12).
Nampiasa andian-teny fanoharana fohy ihany koa i Jesosy mba hamaritana ny fomba tokony hitarihan'ny mpanaraka azy an'izao tontolo izao: "Ianareo no fanasin'ny tany. Raha tsy masira intsony ny sira, inona no tokony hataonao amin'ny sira? Tsy ilaina intsony io fa hariana ary avelan'ny olona hanitsaka azy ”(and. 13).
"Ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Tsy takona afenina ny tanàna ambony havoana. Ary tsy mampirehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa amin'ny labozia; ka mamirapiratra ho an'izay rehetra ao an-trano izy ”(and. 14-15). Tsy tokony hiafina ny mpianatra - fa tokony ho hita maso izy ireo. Ny ohatra nasehon'izy ireo dia ampahany amin'ny hafatr'izy ireo.
"Aoka hazava eo imason'ny olona ny fahazavanao hahitany ny asa soa ataonao ka hiderany ny Rainao any an-danitra" (and. 16). Taty aoriana dia nokianin'i Jesosy ny Farisianina satria te-ho hita izy ireo amin'ny asany (Mat
6,1). Ny asa tsara dia tokony ho hita, fa ho voninahitr'Andriamanitra, fa tsy ny antsika.
«Aza ataonareo fa tonga handrava ny lalàna na ny mpaminany aho; Tsy tonga handrava aho fa hanatanteraka »(and 17). Betsaka ny olona mifantoka amin'ny lalàna eto ary miahiahy fa momba ny tian'i Jesosy hanaisotra ny lalàn'ny Testamenta Taloha na tsia. Manasarotra ny fandikana ireo andininy ireo, satria manaiky ny rehetra fa ao anatin'ny iraka nampanaovina azy dia notanterahin'i Jesosy Kristy ny lalàna sasany izay nohamarinina. Firy ny lalàna voakasik'izany mety hiadian-kevitra, fa ny rehetra kosa manaiky fa tonga hanafoana ny sasany amin'izy ireo i Jesosy.
Tsy miresaka lalàna (plural!) I Jesosy fa momba ny lalàna (singular!) - izany hoe momba ny Torah, ireo boky dimy voalohany ao amin'ny Soratra Masina. Miresaka momba ny mpaminany koa izy, ampahany lehibe hafa ao amin'ny Baiboly. Ity andininy ity dia tsy momba ny lalànan'ny tsirairay, fa momba ny bokin'ny Testamenta Taloha iray manontolo. Jesosy tsy tonga hanafoana ny soratra masina fa hanatanteraka azy.
Dia hoy Jesosy: "Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Mandra-pahafoanan'ny lanitra sy ny tany, dia tsy hiala amin'ny lalàna ny taratasy kely indrindra sy ny lagilasy mandra-pahatanterak'izany rehetra izany" (and. 18). Fa ny kristiana dia tsy mila forana ny zanany, tsy manamboatra trano bongo na manao kofehy manga amin'ny vatan-drongony. Manaiky ny rehetra fa tsy mila mankatò ireo lalàna ireo isika. Ka inona no tian'i Jesosy holazaina rehefa nilaza izy fa tsy hisy hanafoanana ny lalàna? Sa tsy izany, raha ny fampiharana azy dia nanjavona ireo lalàna ireo?
Misy hevitra fototra telo momba izany. Voalohany, hitantsika fa tsy lasa ireo lalàna ireo. Mbola voatanisa ao amin’ny Torah izy ireo, nefa tsy midika izany fa tsy maintsy mankatò azy ireo isika. Marina izany, saingy toa tsy izany no tian’i Jesosy holazaina eto. Faharoa, azo lazaina fa mitandrina ireo lalàna ireo ny Kristianina amin’ny finoana an’i Kristy. Mitahiry ny lalàn’ny famorana ao am-pontsika isika (Romana 2,29) ary mitandrina ny lalàna rehetra amin’ny finoana isika. Marina koa izany, nefa tsy tokony ho araka izay nolazain’i Jesosy teto.
Fahatelo, marihina fa 1. tsy misy ny lalàna mety ho lany andro vao tanteraka ny zava-drehetra ary 2. samy manaiky fa tsy manankery intsony ny sasany amin'ireo lalàna. Araka izany dia 3. tsoahanay fa efa tanteraka ny zava-drehetra. Nahatanteraka ny iraka nampanaovina azy i Jesosy ary tsy manan-kery intsony ny lalàn’ny fanekena taloha. Nahoana anefa i Jesosy no tokony hilaza hoe “mandra-pahafoanan’ny lanitra sy ny tany”?
Hoy ihany i Jesosy: “Na zovy na zovy no mandrava ny iray amin'ireto didy kely indrindra ireto ka mampianatra ny olona toy izao dia hatao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra; fa na iza na iza manao izany ka mampianatra azy dia hatao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra »(and 19). Inona ireo didy "ireo"? Ny didy ao amin'ny lalàn'i Mosesy ve no resahin'i Jesosy sa ny torolalana nomeny azy tsy ho ela aorian'izay? Tokony homarihintsika fa ny andininy 19 dia manomboka amin'ny teny hoe "noho izany" (fa tsy "ankehitriny" ao amin'ny).
Tena azo inoana fa tsy mitovy ny fifandraisana lojika eo amin’ny andininy faha-18 sy faha-19 ary mifantoka kokoa amin’ny ampahany farany “mandra-pahatongan’izany rehetra izany”. Izany fiheverana izany dia midika izao manaraka izao: Ny lalàna iray manontolo dia hitoetra mandra-pahatongan’izany rehetra izany, ary “noho izany” (satria nahatanteraka ny zavatra rehetra Jesosy), dia tokony hampianatra ireo lalàna ireo isika (ny lalàn’i Jesosy, izay hovakintsika), fa tsy ny ny lalàna taloha izay tsikerainy. Misy dikany kokoa izany rehefa jerena ao amin’ny tontolon’ny toriteny sy ny Testamenta Vaovao. Tokony hampianarina ny didin’i Jesosy (Mat 7,24; 28,20). Nanazava ny anton’izany i Jesosy: “Fa lazaiko aminareo fa raha tsy tsara noho ny an’ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra mihitsy ianareo.” ( and. 20 ).